Ra’iisul wasaarihii hore ee JFS Prof. C/wali Maxamed Cali Gaas oo soo gaaray Qardho
October 27, 2012 - Written by
Qardho:- Ra’iisul wasaarihii hore ee Dowladda federaalka Soomaaliya Prof. C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa manta gaaray magaalada Qardho kadib markii uu salaada Ciid-u-Adha kutukaday magaalada Garoowe halkaas oo uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa kasoo jeediyey oo dadweynuhu aad u soo dhaweyeen hadalada qiimaha leh.
Prof. C/wali Maxamed Cali ayaa salaada ciid kadib ku booqday Gurigiisa Islaan Ciise Islaan Maxamed salaanta islaanka kadibna usoo amba baxay magaalada Qardho isagoo ku hakaday dhamaan magaalooyinka iyo tuulooyinka u dhexeeya Garowe iyo Qardho iyadoo meelkasta taxnaayeen madaxda, dhalinyarada, haweenka, iyo waxgaradka degmooyinkaas kuna soo dhaweynayeen professor Cabdiweli iyo wafdigiisa sharaf iyo mudnaan.
Prof. Gaas ayaa si aad u balaaran loogu soo dhaweyey magaalada Qardho oo sababtay in uu gaariga ka dago markay dadweynaha faraha badan xireen jidka dheer halkaasna uu lug ku dhexmaray kuna gacan qaaday dhamaantood.
Mudane Cabdiweli Gaas ayaa lagu wadaa in uu joogo magaalada Qardho labada beri ee soo socota halkaasna shirar wadatashiya kula yeesho waxgaradka, ururada bulshada iyo odayaasha magaalada. Ra’iisulwasaarihii hore ayaa kadib safarkiisu kuwajihidoona magaalooyinka Boosaaso, Baran, Buuhodle, iyo Qarkale.